Home Wararka Dagaal khasaare geystay oo dhexmaray Soomaalida iyo Cafarta
Dagaal khasaare geystay oo dhexmaray Soomaalida iyo Cafarta
Wararka ka imanaya deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal uu shalay ka dhacay aagga Caydhkaal oo dhanka bari ka xigta Magaalada Cadeyti ee Gobolka Siti.
Sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka dagaalka waxaa soo qaaday ciidamo ka soo duulay Deegaanka Canfarta. Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay dhimashada 1 qof iyo dhaawaca 6 kale. Maamulada labada deegaan ee Canfarta iyo deegaanka Soomaalida ayaan wali ka hadal dhacdadan. Maamulada labada deegaan ee Canfarta iyo deegaanka Soomaalida ayaan wali ka hadal dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay.